May 16, 2019 - CeleLove
ကွင်းလယ်ကစားသမား ကျော်မင်းဦးနှင့် ဇေယျာနိုင်တို့၏ ဒူးဒဏ်ရာခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်..
May 16, 2019 Cele Love 0
ကွင်းလယ်ကစားသမား ကျော်မင်းဦးနှင့် ဇေယျာနိုင်တို့၏ ဒူးဒဏ်ရာခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်.. ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရသည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဟောင်း ကွင်းလယ်လူ ကျော်မင်းဦးနှင့် လူငယ်လက်ရွေးစင်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဇေယျာနိုင်တို့၏ဒဏ်ရာကို မေ ၁၄ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ရာ အောင်မြင်ခဲ့တယ် လို့သိရပါတယ် …။ ကျော်မင်းဦးသည် ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက […]
နောက်ဆက်တွဲသတင်း ရဲအုပ်နှင့့််ဇနီးဖြစ်သူတို့သေနတ်ဒဏ်ရာများနှင့်သေဆုံးမှု မိတ္တီလာမြို့မရဲစခန်းဝန်းအိမ်ထောင်သည်လိုင်းအတွင်းရဲအုပ်နှင့့််ဇနီးဖြစ်သူတို့သေနတ်ဒဏ်ရာများနှင့်သေဆုံး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ္တီလာမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းဝန်းအတွင်းရှိနှစ်ထပ်ဆောင်အရာရှိတိုက်ခန်းလိုင်းအပေါ်ထပ်နေအိမ်တိုက်ခန်းတွင်ရဲအုပ်အဆင့်အရာရှိတစ်ဦးနှင့်ဇနီးဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးအားသေနတ်ဒဏ်ရာများနှင့်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် …။ မေ(၁၆)ရက်နံက်(၉) နာရီခန့်မြို့မရဲစခန်းဝန်းရှိနှစ်ထောင်ဆောင်အရာရှိအိမ်ထောင်သည်တိုက်ခန်းအပေါ်ထပ်တိုက်ခန်းနေခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးရေး/ထောက်ဌာနစိပ်မှရဲအုပ်အောင်နိုင်ထွန်းနှင့်ဇနီးဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်းတို့နေအိမ်တိုက်ခန်းအတွင်းသေဆုံးနေကြောင်းသတင်းအရ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့်မြို့မရဲစခန်းမှူးတို့မှသက်သေများနှင့်အတူစစ်ဆေးကြည့်ရှု့ရာရဲအုပ်အောင်နိုင်ထွန်းတွင်ယာနားထင်မှနဖူးထိပ်ဖောက်ထွက်သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့်တောင်ဘက်ခေါင်းပြု၍လည်းကောင်း ဇနီးဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်းတွင်ယာနားအတွင်းသွေးထွက်သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့်အနောက်မြောက်သို့ခေါင်းပြုလျက်သေဆုံးနေပြီးရဲအုပ်အောင်နိုင်ထွန်း၏လက်တွင်ပစ်ခတ်ပြီးသေနတ်ကိုင်ဆောင်ထားလျက်စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ် …။ သေဆုံးသူအလောင်းများအားရဲစခန်းဆေးစာများနှင့်အတူကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့သူနာပြုယာဉ်ဖြင့်ပြည်သူဆေးရုံသို့ရင်ခွဲစစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက်ပို့အပ်ထားရှိပြီးသေဆုံးခြင်းအမှန်သိရှိနိုင်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ် …။ uNICODE နောကျဆကျတှဲသတငျး ရဲအုပျနှငျ့ျ့ဇနီးဖွဈသူတို့သနေတျဒဏျရာမြားနှငျ့သဆေုံးမှု မိတ်တီလာမွို့မရဲစခနျးဝနျးအိမျထောငျသညျလိုငျးအတှငျးရဲအုပျနှငျ့ျ့ဇနီးဖွဈသူတို့သနေတျဒဏျရာမြားနှငျ့သဆေုံး မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးမိတ်တီလာမွို့နယျမွို့မရဲစခနျးဝနျးအတှငျးရှိနှဈထပျဆောငျအရာရှိတိုကျခနျးလိုငျးအပျေါထပျနအေိမျတိုကျခနျးတှငျရဲအုပျအဆငျ့အရာရှိတဈဦးနှငျ့ဇနီးဖွဈသူတို့နှဈဦးအားသနေတျဒဏျရာမြားနှငျ့သဆေုံးမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ …။ မေ(၁၆)ရကျနံကျ(၉) နာရီခနျ့မွို့မရဲစခနျးဝနျးရှိနှဈထောငျဆောငျအရာရှိအိမျထောငျသညျတိုကျခနျးအပျေါထပျတိုကျခနျးနခေရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးရေး/ထောကျဌာနစိပျမှရဲအုပျအောငျနိုငျထှနျးနှငျ့ဇနီးဒျေါမွငျ့မွငျ့သိနျးတို့နအေိမျတိုကျခနျးအတှငျးသဆေုံးနကွေောငျးသတငျးအရ ခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူးမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးနှငျ့မွို့မရဲစခနျးမှူးတို့မှသကျသမြေားနှငျ့အတူစဈဆေးကွညျ့ရှု့ရာရဲအုပျအောငျနိုငျထှနျးတှငျယာနားထငျမှနဖူးထိပျဖောကျထှကျသနေတျဒဏျရာဖွငျ့တောငျဘကျခေါငျးပွု၍လညျးကောငျး ဇနီးဒျေါမွငျ့မွငျ့သိနျးတှငျယာနားအတှငျးသှေးထှကျသနေတျဒဏျရာဖွငျ့အနောကျမွောကျသို့ခေါငျးပွုလကျြသဆေုံးနပွေီးရဲအုပျအောငျနိုငျထှနျး၏လကျတှငျပဈခတျပွီးသနေတျကိုငျဆောငျထားလကျြစဈဆေးတှရှေိ့ရကွောငျးသိရပါတယျ …။ သဆေုံးသူအလောငျးမြားအားရဲစခနျးဆေးစာမြားနှငျ့အတူကွကျခွနေီတပျဖှဲ့သူနာပွုယာဉျဖွငျ့ပွညျသူဆေးရုံသို့ရငျခှဲစဈဆေးနိုငျရေးအတှကျပို့အပျထားရှိပွီးသဆေုံးခွငျးအမှနျသိရှိနိုငျရေးအတှကျစုံစမျးစဈဆေးဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျးသိရှိရပါတယျ …။
ခြေစွယ်ငုတ်နေသူများ မနာမကျင်ပဲ ခြေသည်းဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပြန့်လာပြီး နောက်ထပ် ခြေစွယ်မငုတ်တော့မည့် နည်းလမ်းကောင်း..
ခြေစွယ်ငုတ်နေသူများ မနာမကျင်ပဲ ခြေသည်းဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပြန့်လာပြီး နောက်ထပ် ခြေစွယ်မငုတ်တော့မည့် နည်းလမ်းကောင်း.. ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းက ခံရခက်ပြီး ကုသလို့ အမြစ်မပြတ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆို မျက်ရည်ကျသည်ထိ လှီးဖြတ်ပြစ်ကြပြီး ဆီချက်ပူ လောင်းထည့်တာမျိုးလည်း မြင်ဖူးပါတယ် …။ နောက်တော့ ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ။ ခု ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းလေးက မနာမကျင်ပဲ […]
ယောက်ကျားကို မယုံလို့ စိတ်မချတဲ့ ဇနီးရဲ့ ကျေးဇူးကြီးမားပုံ
ယောက်ကျားကို မယုံလို့ စိတ်မချတဲ့ ဇနီးရဲ့ ကျေးဇူးကြီးမားပုံ ယောက်ကျားကို စိတ်မချတဲ့ ဇနီးရဲ့ကျေးဇူး မိန်းမ မသိအောင် ကာရာအိုကေ နဲ့အနှိပ်ခန်းတွေသွားတတ်သူ ခင်ပွန်းကိုဘယ်သွားတယ်ဆိုတာ အမိဖမ်းရအောင် ကားထဲမှာ GPRS (ကားမည်သည့်နေရာ သွားသည့် လမ်းပြ ပြေပုံမှတ်တမ်း) ဖုန်းကို […]
ဂစ်တာတီးတတ်တဲ့ ကိုကို၊ မောင်တွေကို ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇) ချက်
ဂစ်တာတီးတတ်တဲ့ ကိုကို၊ မောင်တွေကို ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇) ချက် ဂစ်တာတီးတတ်တဲ့သူတွေဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ပိုခံရတာ အမှန်ပါပဲနော်။ ဂစ်တာတီးတတ်တဲ့ ကိုကို၊ မောင်တွေကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့လည်း ပိုသင့်တော်ပါသတဲ့။ အကြောင်းရင်းလေးတွေကတော့ ဒီမှာပါ …. ။ (၁) သူတို့ဆီကနေ ဂစ်တာတီးတာပြန်သင်ပြီး […]
မိန်းကလေးတွေဒီလူကိုတွေ့ ရင်သတိထားကြပါ အခုလေးတင်YBS35ပေါ်မှာ ဖြစ်တာပါ။သူလဲမြောက်ဥက္ကလာကတက်လာတယ့်ကောင်ပါပဲ။ ညီမကအစနေရာမရလို့မတ်တပ်ရပ်နေတာခနနေတော့နေရာလွတ်သွားလို့အနောက်မှာ သွားထိုင်တယ်။အဲ့ကောင်လဲဘေးနားလာထိုင်ပါတယ်။အစကတော့ကွမ်းစားလိုက်ကွမ်းတံတွေးထုပ်ကိုလွတ်ပစ်လိုက်နဲ့ ပြီးလဲပြီးရောထမလိုလိုအရှေ့ပဲတိုးမလိုလိုနဲ့ညီမလွယ်အိတ်ကြားကနေBoobကိုလာကိုင်ပါတယ် …. ။ photo aye thu thu han ညီမလဲခါးပိုက်နှိုက်တယ်ထင်လို့လွယ်အိတ်ကိုယူတယ့်အချိန်မှာသူလက်ကရောက်နေပြီ …. ။ ကိုယ်လဲ၆ယောက်ထိုင်နေရတာကျပ်တယ်အထင်နဲ့ပါပြီးတော့ညီမထလဲထလိုက်ပြီးအဲ့ကောင်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာသူတောင်းစားကသူ့ရိုက်နေမှန်းသိလို့ရှောင်နေတယ်။ညီမလဲမရရအောင်ရိုက်ခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ကောင်ကိုတွေ့ရင်သတိထားပါ။ ၃၅စီးတယ့်မိန်းကလေးတွေလဲ သတိထားကြပါနော် …. ။ Edit:ဘေးနားကလူတွေကိုလဲ ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ညီမသင်တန်းကအစ်မတွေကိုလဲမှတ်တိုင်မှာလာကြိုဖို့ဖုန်းကြိုဆက်ထားပါတယ်။သူ့မျက်ခွက်ကို ရိုက်ပြီးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆိုတာကြောက်နေတယ့်အချိန်ဖြစ်နေတယ့်အတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရပါဘူး။အဲ့အကောင်လဲညီမပြောလိုက်လို့မာလာမှာဆင်းသွားပါတယ်။ဓာတ်ပုံပဲရိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတခြားမိန်းကလေးတွေသူ့ကိုတွေ့မိရင်ရှောင်ရအောင်အတွက်ပါ […]
စေတီတော်မှရွှေများမိုးကြိုးပစ်မှုကြောင့်ကွာကျ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တစ်ဝိုက်တွင် မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုကြောင့် မိုးကြိုးစက်ကွင်းထိမှန်ကာစေတီတော်ရှိရွှေအချို့ကွာကျခဲ့ပြီး CCTVစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ခန်းမှSystem Uniteပုံးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား အောင်မြင့်ထွန်း(မြစ်မခ)သထုံ၊ မေ၁၆ရက် မွန်ပြည်နယ်၊ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တစ်ဝိုက်တွင်မေ၁၅ ရက်၊ညကမိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိုးကြိုးစက်ကွင်းထိမှန်ကာ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ရှိရွှေအချို့ကွာကျခဲ့ပြီး CCTVစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ခန်းမှ System Uniteပုံးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကျိုက်ထီးရိုးဂေါပကအဖွဲ့မှသိရှိရပါတယ် …။ “ည၁၀နာရီလောက်ကမိုးတော်တော်ရွာတယ်။မိုးကြိုးလည်း သုံးကြိမ်လောက်ပစ်တယ်။ မိုးကြိုးစက်ကွင်းမလွတ်တဲ့ သဘောပါ။ဘုရားကတော့အများကြီးထိခိုက်ပျက်စီးတာမရှိဘူး။ ရွှေဖတ်တွေကွာကျသွားတယ်။ ကွာကျသွားတဲ့နေရာကိုသရိုးကိုင်ပြီးတော့ပြန်လုပ်သွားမှာပါ …။ အခုမနက်(မေ ၁၆ […]
ဝဋ်ကြွေးတွေ ကျေပါစေ သမီးငယ်လေး အရွယ်နှင့်မမျှ သူငယ်​ချင်း ရေနစ်လို့ဝင်ကယ်ရင်း …..
ဝဋ်ကြွေးတွေ ကျေပါစေ သမီးငယ်လေး အရွယ်နှင့်မမျှ သူငယ်​ချင်း ရေနစ်လို့ဝင်ကယ်ရင်း ….. ဝဋ်ကြွေးတွေ ကျေပါစေ သမီးငယ်လေး မထားထားနွယ် အရွယ်နဲ့မမျှ သူငယ်​ချင်း ရေနစ်လို့ဝင်ကယ်ရင်း ကိုယ်တိုင်ရေနစ် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ၈ နှစ်အရွယ် သမီးငယ်လေး မိုးကုတ်မြို့နယ်အရံမီးသတ်ရုံးသို့ သတင်းဝင်ချိန်….10:56ဖုန်းသတင်းအရ မိုးကုတ်မြို့နယ် ရှောလီဝိုင်းအုပ်စု ပိတ်စွယ်ဟိုမှိုင်းရပ်ကွက် အတွင်းရှိ […]
နေပူပူမှာ ရေသူမလေးလို ရေငုပ်နေခဲ့ပြီး ဆွဲမက်စရာကောက်ကြောင်းအလှတွေကို အတိုင်းသားမြင်ခဲ့ရတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ဗီဒီယို
နေပူပူမှာ ရေသူမလေးလို ရေငုပ်နေခဲ့ပြီး ဆွဲမက်စရာကောက်ကြောင်းအလှတွေကို အတိုင်းသားမြင်ခဲ့ရတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ဗီဒီယို ယခုလို ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ အိချောပိုလေးကတော့ ရေကူးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရေသူမလေးလို ရေငုပ်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုကတော့ တောင့်တင်းတဲ့ ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်းတွေကြောင့် နာမည်ကြီးနေသူလေးဖြစ်ရာ ယခုမှာလဲ သူမရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေအတိုင်းသားမြင်နေရတဲ့ ဗီဒီယိုလေးဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့ပါတယ် […]
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ငွေတိုက်သော့ကိုင်က ဘဏ်ငွေတိုက်ထဲမှ သိန်း ၄၀၀၀ ခိုးယူမှု
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ငွေတိုက်သော့ကိုင်က ဘဏ်ငွေတိုက်ထဲမှ သိန်း ၄၀၀၀ ခိုးယူမှု ကျိုက်ထို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ငွေတိုက်သော့ကိုင်က ဘဏ်ငွေတိုက်ထဲမှ သိန်း ၄၀၀၀ ခိုးသွားတာပါ …. ။ ကျိုက်ထို၊ မေ ၁၅(သတင်းတမန်) မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ငွေတိုက်သော့ကိ်ိုင် တစ်ဦးက ဘဏ်ငွေတိုက်ထဲမှ ကျပ်သိန်း ၄၀၀၀ ခိုးယူသွားမှု မေ ၁၄ ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သည် […]